Senza isipho kumngane ngezandla zethu
Njengoba wazi, kuze kube yimanje, imibono yesipho ngezandla zabo siqu ibaluleke kakhulu kunomsebenzi wokuvinjelwa esitolo kanye nokuthengwa kwamanye ama-trinkets angadingekile. Abanye abantu banombuzo onengqondo: "Kungani?" Okokuqala, ngoba umuntu othe wanquma ukukunika isipho kuwe uyakuthanda futhi uyakwazisa. Yingakho kubaluleke kakhulu ukuba enze isipho ngokwakhe, abeke umphefumulo nenhliziyo yakhe kuwo. Futhi kungenjalo kufanele usole leli muntu ngenxa yokuntuleka kwemali noma isikhathi sokuthenga. Ngoba izinto ezenziwe ngesandla zithandwa kakhulu, hhayi nje phakathi kwabantu abasha. Sinikeza izinketho ezimbalwa zendlela yokwenza isethu ngokwakho. Isipho kumngani ngezandla zakhe siqu sizobukeka kakhulu, sihluke kakhulu esitolo esivamile esihlanganiswe ekupaketheni okukhanyayo kodwa okungavamile.
Ngakho-ke, ake sibheke izinketho ezimbalwa mayelana nesiphi isipho somngane ongasenza ngezandla zakhe kanye nalokho esikudingayo ngalokhu. Njengoba sifuna ukwethula hhayi kuphela okuhle, kodwa futhi nesipho esidingekayo, siphakamisa ukuthi simise kunguqulo yedayari yesifazane. Ngokuqinisekile, kunezinye izinketho zesipho sowesifazane, kodwa intombazane ukuthi idayari izoba yinto ebalulekile kakhulu, ngoba manje sekuye kwaba yindabuko ukuqhuba okuthiwa "idayari yomuntu siqu" lapho ungabhala phansi yonke imicabango yakho. Okunye okunye kwalokhu kudayari kungavamile. Ungaphikisani, izinkampani eziningi manje zikhishwa izincwadi zokubhala ngekhava elikhanyayo nelomane nje elimangalisayo, kodwa ngeke kube khona idayari elinjengomngane wakho, futhi lokhu kuyisimo sakhe esicacile, esithandwa yinoma iyiphi intombazane. Khumbula ukuthi into eyinhloko igxila, hhayi isipho (uma kwenzeka uma kungenakulungile).
Njengoba sinqume ukuthi yisiphi isipho esifuna ukukwenza kumngane wethu, sidinga ukulungisa izinto ezidingekayo, okuzoxoxwa kamuva. Esikhathini sokwenza isipho sizodinga: idayari evamile (noma incwadi elula enamandla), izingcezu ezimbili zephepha elihle kakhulu elimibalabala elinamaphetheni ahlukene (umbala owodwa awusoze usebenze), i-glue, ama-rhinestones (kwanoma yisiphi isayizi nokuma, ungakwazi ngisho ubuhlalu noma ubuhlalu), izikhali kanye nokuhlobisa okuncane I-Ribbon. Ngakho, indaba isilungile, manje siyaqhubeka ukuchaza ukuthi singayenza kanjani isipho kumngane ngezandla zakho.
Siqala ngesenzo sokuvinjelwa kakhulu - sihlanganisa yonke ingxenye yangaphambili yencwadi eneglue. Okulandelayo, kubalulekile ukuthi ubeke iphepha lethu elimibalabala ngokucophelela bese ulinamathisela, uqinisekise ukuthi emaphethelweni ephepha elimibala kanye nedayari lihambisana. Ukuhlanganisa iphepha kudingekile kuphela! (!) Engxenyeni engaphambili, ukushiya ngokuphelele ohlangothini lwencwadi. Ngakho-ke leli phepha alishintshi (okuyinto evame kakhulu ukufakwa kweglue), sizama kanzima ukucindezela emaphethelweni encwadi yokubhala ngesikhathi sokugcoba. Lokhu kuzosiza ukuqeda umoya owedlulele ngaphakathi, ngenxa yokuthi imingcele engalingani iyakhiwa. Uma usuvele wenze iphutha elinjalo, khona-ke kungalungiswa ngokubeka ibhuku lezincwadi ngaphansi komshini usuku.
Okulandelayo, yenze uhlangothi lwale ncwadi. Yingakho udinga uhlangothi lwesibili lwephepha elinemibala enephethini ehlukile. Sika umdwebo ofanele bese uwunamathisela phezulu kwesigcawu sokuqala sephepha, kodwa ukuze uvele kancane kancane kuwo. Phinda uqede ngokucophelela imiphetho.
Manje kukhona ukuhlobisa kuphela ngamabhande namacici - kuxhomeke ngokuphelele emcabangweni wakho.
Ngomhla ka-8 kuNcwaba, izipho ngezandla zomuntu siqu nazo zizofaneleka, njengosuku lokuzalwa, futhi, mhlawumbe, unquma ukwenza idayari elinjalo intombi noma umama.
Izingoma ze-Autumn ezivela emifino nezithelo. Sakha ubuciko ezivela kwizipho zemvelo
Kusho ukuthini kwalokho "Skyrim" nokuthi ungazithola kuphi na?
Izinkampani Okuphethwe kanye nendima yabo umthetho Russian
Shvetsov Evgeny - Paralympic iqhawe e 800 amamitha yabesifazane
Biography Lera Kudryavtseva - a yimpumelelo actress kanye TV umethuli
Physalis Ezidliwayo: ezikhula imbewu